Music – Page 4 – The Ulwazi Programme
Usina uyazibethela kulezinsuku umculi kaMaskandi iGcokama Elisha okubukeka engathi izinto zimhambela kahle kakhulu empilweni. Zisina ziyadedelana impela ezinhle kumfoka Manqele. Akujwayelekile ukubona uhlelo olumayenalana nomculi thizeni kaMaskandi libhunga ngamagalelo akhe kanye nezinselelo aseke wabhekana nazo ukuze abe sezingeni asekulo. Izinhlelo ngamaciko athile sizigcina kakhulu ngamaciko akulena eminye imikhakha yemculo. Lapha singabala umkhakha weHip Hop njengoba … Read more
Categories Music, People Tags Mthandeni Manqele
Mnumnzane Jan Smith
Bakhihla esikaNandi abalandeli kanye namaciko emculo wesintu uMaskandi ngokuwa kwesihlahla esikhulu umnumnzane Jan Smith. UJan amagalelo akhe kulomculo ajule kakhulu futhi waziwa ngisho uhlanya lomculo wesintu. UJan Smithi ubengumnikazi wendawo yokuqopha lapho kuqopha khona amaciko kaMaskandi. Maningi amaciko aphume ngaphansi kwesandla sakhe esebenza ngaphansi kweStudio esibizwa ngokuthi yiTakk Studios okuyila bezidlana khona imilala, ziphekwe zithulelwe … Read more
Categories Music, News, People Tags Mnumnzane Jan Smith
Kuzoshunq’ uthuli siyibhikla kule mpelasonto mhlaka 25 Septemba e-The Playhouse Company eThekwini. Izingqalabutho Maskandi Concert izobe ibophele izinkakha ezizobe zisina zidedelana zenza ezidume ngazo. Le concert ezobe ibophele izingqalabutho zamaskandi njengegama layo kuzobe kukhona omakade bebona singabala uPhuzekhemisi, Madala Kunene, Thwalofu, Bheki Khoza, Nkunz’ Emdaka kanye nabanye. Kulindeleke amanoni ezingoma alezi zinkakha. Uma ucabanga ezingasoze … Read more
Categories Music, News Tags Izingqalabutho zaMaskandi, Madala Kunene, Maskandi, Maskandi Music, Phuzekhemisi
Mthokozisi “DJ Tira” Khathi
Uma ucabanga ngomculo weKwaito, iGqom nobumnandi eThekwini namaphethelo ngeke ushiye ngaphandle uDj Tira. Kulesi siqeshana sibheka umlando kaDj Tira insizwa ezakhele udumo kwezomculo ngokuba uDj aphinde aphathe inkampani i-Afrotainment engenye yezinkampani zomculo ehamba phambili eNingizimu Afrika. DJ Tira UDJ Tira ogama lakhe langempela uMthokozisi Khathi, wazalwa ngo-Agasti 24, 1976 endaweni yakwaHlabisa, KwaZulu Natali. Wafunda amabanga … Read more
Categories Music, People Tags Afrotainment, DJ Tira
UGadla Nxumalo – Google
Abantu bahlale bekhalaza ngezinhlaka zikahulumeni ezingawenzi umsebenzi wazo okumele bewenzele izakhamuzi. Lokhu ke akumangazi ngoba phela umsebenzi wakhe uhulumeni ukuhlangabeza abantu ngezidingonqangi zabo futhi nguye osuke ebathembise lokho uma kukhankaselwa ukuvota. Ziningi izikhalo abantu abahlale benazo bekhala ngokugqoza kwezinhlelo zokuthuthukisa umphakathi okubi ke ukuthi isikhathi esiningi ukukhala kwabo kuwela edwaleni njengoba bengathathelwa phezulu uma bekhala. … Read more
Categories Music, People Tags Gadla Nxumalo
uMshado kaBabes Wodumo noMampintsha
Bekukuhle kudelile ngenyanga edlule kugcagcelwa isilomo saseThekweni kwelikaBhanana esicula umculo wekwaito neGqomu uMandla Maphumulo odume ngelikaMampantsha kwezobumnandi eshadelwa inguduso yakhe uBongekile Simelane edume kakhulu ngegama lika Babes Woduma ocula umculo weGqom aziwa kakhulu ngawo. Abebehambele lomshado abawuvali umlomo ngobuhle bawo kanti nasezinkundleni zokuxhumana izithombe zawo lomshado beziyinsambatheka impela kuhle komchilo wesidwaba ziwundabamlonyeni nakubo abamaphepha, imisakazo … Read more
Categories Music, News Tags Babes noMampintsha